नोबेल अस्पताल सञ्चालक डा. शर्माले कोरोना संक्रमितलाई निःशुल्क खुवाउँन थाले खाना - Pradesh Dainik
नोबेल अस्पताल सञ्चालक डा. शर्माले कोरोना संक्रमितलाई निःशुल्क खुवाउँन थाले खाना
बिराटनगर, नोबेल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले कोरोना संक्रमितहरुलाई निःशुल्क खाना खुवाउँन थालेका छन् । नोबेल अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितहरुलाई डा. शर्माले आफ्नै खर्चमा मंगलबारबाट निःशुल्क खाना खुवाउँन थालेका हुन् ।
नोबेल अस्पतालमा भर्ना भएका सबै कोरोना संक्रमितलाई विहान–वेलुकाको खाना निःशुल्क खुवाउँने घोषणा गरेर डा. शर्माले खाना वितरण थालेका हुन् । ‘कोरोना संक्रमितहरुलाई केही सहयोग पुर्याउँ भनेर हामीले निःशुल्क खाना खुवाउँन थालेका छौं,’ डा. शर्माले भने, ‘अस्पतालमा भएका सबै कोरोना संक्रमितलाई असार मसान्तसम्म बिहान बेलुकाको खाना निःशुल्क खुवाउँछौ । सम्भव भयो भने त्यो भन्दा पछि पनि खुवाउँने सोचमा छु ।’
नोबेल अस्पतालमा अहिले १२० जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन् । मंगलबार बिहान सबै संक्रमितलाई निःशुल्क खाना वितरण गरिएको छ । अस्पतालमा भएका सबै संक्रमितलाई हरेक दिन बिहान–बेलुका दाल, भात, तरकारीसहितको खानाको प्याकेट र एक÷एक वोतल मिनिरल वाटर वितरण गरिने खाना वितरणमा खटिएकी नोबेल अस्पतालकी डा. बन्दना घिमिरेले जानकारी दिइन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसंगको सम्झौता अनुसार नोबेल अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गरिदै आएको छ । अब, अस्पताल सञ्चालक एवं समाजसेवी डा. शर्माले आफ्नै तर्फबाट खाना पनि निःशुल्क वितरण गर्न थालेपछि विरामीहरुलाई थप राहत मिलेको छ । डा. शर्मा समाजसेवाका क्षेत्रमा सक्रिय छन् । गतवर्ष उनले मोरङको क्षेत्र नं. ३ का बेलबारी, सुन्दरहरैंचा, पथरी शनिश्चरे र कानेपोखरीका कोरोना प्रभावित जनतालाई राहत वितरण गर्न ४० लाख सहयोग प्रदान गरेका थिए ।
उनले हजारौं विपन्न विरामीलाई निःशुल्क उपचार गराएर ज्यान बचाएका छन् । समस्यामा परेकाहरुलाई डा. शर्माले आर्थिक सहयोग पनि गर्दै आएका छन् ।